डचटाउनस्टाल ब्लग Dutch समाचार र घटनाक्रम डचटाउन, सेन्ट लुइस, MO
SLACO र डचटाउन मेन स्ट्रिटहरूको साथ टोली
प्रकाशित फेब्रुअरी 4th, 2022
डचटाउन र छिमेकको आयोजनामा ​​संलग्न हुन चाहनुहुन्छ? हामीसँग तपाईंको लागि अवसर छ!
डचटाउन मुख्य सडकहरू हाम्रो संस्थाको बोर्डहरूसँग काम गर्न सम्पर्क खोज्छ र सेन्ट लुइस समुदाय संगठन को संघ (SLACO)। SLACO 501(c)(3) हो जुन सेन्ट लुइसमा हाम्रो छिमेकीहरूलाई बलियो बनाउने 40-वर्षको इतिहास हो, जुन हालको गठबन्धनको प्रतिनिधित्व गर्दैछ। 33 छिमेकी संस्थाहरू शहर भर।
SLACO मार्फत, तपाईंसँग अन्य सेन्ट लुइस छिमेकीहरूले कसरी रिक्तता, सुरक्षा, र सौन्दर्यीकरण जस्ता समस्याहरू समाधान गर्न सफल हुन्छन् भनेर पत्ता लगाउने मौका पाउनुहुनेछ। तपाईंले डचटाउनमा काम गरिरहेको कुरा साझा गर्न र हाम्रो समुदायमा फिर्ता ल्याउन प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न पनि सक्षम हुनुहुनेछ। "छिमेकको सहर" को रूपमा, शहरभरिका अन्य समुदाय र संस्थाहरूसँगको तपाईंको सहकार्यले डचटाउनलाई मात्र नभई समग्र रूपमा सेन्ट लुइसलाई सम्भावित रूपमा प्रभाव पार्न सक्छ।
डचटाउन र SLACO हालका वर्षहरूमा उत्कृष्ट साझेदार भएका छन्। मिलेर आयोजना गर्यौं यसलाई सफा राख्नुहोस् छिमेकको सरसफाई 2021 को पतनमा Marquette Park वरपर। SLACO ले हाम्रो बढ्दो विकासलाई कार्यान्वयन गर्न डचटाउन संगठनहरूसँग काम गरेको छ। ब्लाक आयोजन प्रयासहरू। र अझ व्यापक रूपमा, SLACO ले डचटाउनका लागि पनि परामर्श र वकालत सेवाहरू प्रदान गरेको छ।
एक सदस्यको रूपमा, डचटाउन मुख्य सडकहरूले SLACO बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा एक प्रतिनिधि र एक वैकल्पिक नियुक्त गर्न सक्छन्। हामी समुदायबाट आवेदकहरू खोजिरहेका छौं जो डचटाउनको SLACO प्रतिनिधि हुन इच्छुक छन्। केवल आवश्यकता भनेको तपाईं 18 वर्ष वा माथिको हुनुहोस् र ठूलो डचटाउन क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ।
प्रतिनिधिहरूलाई SLACO को बोर्ड बैठकहरूमा उपस्थित हुन र डचटाउन संगठनहरू - डचटाउन मुख्य सडकहरूमा रिपोर्ट गर्न भनिएको छ। डचटाउन साउथ कम्युनिटी कर्पोरेशन, र अन्य — SLACO पहलहरू र डचटाउनसँग सम्भावित साझेदारीहरूमा।
आवेदकहरूले चासोको इमेल पठाउन सक्छन् info@dutchtownstl.org (वा हाम्रो मार्फत सम्पर्क फारम) उनीहरूको नाम, ठेगाना, र आवेदकले कसरी SLACO मा डचटाउनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने भनेर संक्षिप्त सुझावहरू प्रदान गर्दै आफ्ना छिमेकीहरूलाई सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सहज बनाउन। यो एक अवैतनिक स्वयंसेवक स्थिति हो।
तल दायर गरिएको डचटाउन मुख्य सडकहरू. सबै कोटीहरू देखाउनुहोस्. डचटाउन मुख्य सडकहरू र स्वयम्सेवक अवसरहरू. कम कोटीहरू देखाउनुहोस्.
यस पोस्ट साझा गर्नुहोस् फेसबुक, twitter, वा मार्फत इमेल। यो पोष्ट अन्तिम पटक अपडेट गरिएको थियो फेब्रुअरी 4th, 2022 .